eNasha.com - भल्भो कार सबैभन्दा सेक्सी !
भल्भो इस्टेट कारलाई सबैभन्दा अल्छिलाग्दो डिजाइन भएको कारका रुपमा मानिसले मतदान गरेर के भो अधिकांशले यसको पछिल्लो सिटमा यौन क्रियाकलाप गर्न ज्यादै सजिलो कारका रुपमा मतदान गरेका छन् ।
हालैको सर्भेले यो कुरा देखाएको हो । यस कारमा भएको पछिल्लो भागको ठूलो खाली ठाउँका कारण मानिसहरुले यसलाई यौनिक क्रियाकलापका लागि अति राम्रो ठाउँ भएको बताएका छन् ।
कारको यो दौडमा भल्भोको पछिपछि मर्सिडिज् बेञ्जको स्प्रिन्टर भ्यान दोस्रो स्थानमा परेको छ । अर्थात्, दोस्रो सबैभन्दा सेक्सी कार ! 'मल्टी परपोज'का लागि प्रयोग गरिने यो कार प्रयोगकर्ताहरुको दोस्रो रुचिमा पर्न गएको हो ।
चार हजार विभिन्न व्यक्तिहरुले यसइन्स्योरेन्सडटकोडटयुके वेबसाइटमा दिएको भोट अनुसार भीडब्लु क्याम्पर भ्यान चाहिँ तेस्रो स्थानमा परेको छ । त्यस्तै बीएमडब्लु थ्री शृङ्खला अन्तर्गतको सेलून चौथो नम्बरमा र फोड एस्कर्ट चाहिँ पाँचौँ स्थानमा पर्न सफल भएको छ ।
मतदाताहरुका अनुसार ६८ प्रतिशत व्यक्तिले कारभित्रै यौन सम्पर्क गर्ने गरेका छन् र तीमध्ये १० जनाले चाहिँ कार चलाउँदै गर्दा यौन सन्तुष्टी समेत लिने गरेका छन् ।
६ प्रतिशतले यौन सन्तुष्टी लिँदै गर्दा कारमा क्षति पुर्‍याएका थिए भने ती एक सयमध्ये एक जनाले मात्र क्षतिपछि इन्स्योरेन्सको दाबी गरेका थिए ।
यसइन्स्योरेन्सडटकोडटयुकेका प्रवक्ताले भने- "यस मतदानले के देखायो भने जोडीवालहरु खाली ठाउँलाई बढी महत्व दिँदा रहेछन्, ताकि जस्तै व्यस्तताका बावजूद जिन्दगीको खल्लो मेट्न सकियोस् ।"
यसैबीच एक अर्को सर्भेका अनुसार गाडी चलाउँदै गर्दा चालकहरुले गाडीको अघिल्तिर रोडमा भन्दा पनि 'सेक्स'का बारेमा सोचिरहेका हुन्छन् ।
मोर देन नामक कार इन्स्योरेन्स कम्पनीले पाँच जना चालकमध्ये एक जनाले मात्र गाडीको स्थितिबारे पूर्णरुपमा सोच्ने गरेको बताएका छन् । नत्र त ७५ प्रतिशतभन्दा बढीले गाडी चलाउँदै गर्दा मात्र सेक्सका बारेमा सोच्ने गरेका छन् । यसरी सोच्नेमध्ये १२ लाख चालक रहेका छन् ।
३२ लाख चालकहरुले चाहिँ आफ्नो कामलाई बढी महत्व दिने र २० लाख चालकले चाहिँ घरपरिवारको समस्या आफूसँगै लिएर हिँड्ने गरेको अध्ययनले बताएको छ ।